Posted by Tranquillus | Apr 17, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Qaadashada qoraallada inta lagu jiro kulan ma fududa. Haddi aad soo gudbiso warbixinta ama warbixinta, si aad ugu qorto waraaq kasta oo la yiraahdo waxay u baahan tahay farsamo gaar ah.
Waa kuwan talooyinkeyga si aad u qaadato qoraallo wax ku ool ah kulannada, talooyin sahlan si aad meel u dhigto oo kuu badbaadin doona waqti badan.
Qaadashada qoraallada, dhibaatooyinka ugu waaweyn:
Sidii aad u maleyn laheyd, waxaa jira farqi muuqda oo u dhexeeya xawaaraha hadalka iyo qiyaasta qorista.
Run ahaantii, afhayeenku wuxuu ku hadlaa celceliska erayada 150 daqiiqad kasta iyada oo qoraal ahaan aanan badinaynin ereyada 27 daqiiqadii.
Si aad u noqoto mid waxtar leh, waa inaad awood u yeelatid dhageysiga iyo qorista isla waqti isku mid ah, taas oo u baahan waxyaabo gaar ah iyo hab wanaagsan.
Ha dayicin diyaarinta:
Tani dhab ahaantii waa tallaabada ugu muhiimsan, sababta oo ah waxay ku xiran tahay tayada qoraalkaaga ee aad ku qaadatay kulanka.
Maaha mid ku filan inaad timaado kulan aad la socotid qoraalkaaga gacantaada hoostiisa, waa inaad diyaarisaa naftaada iyo tani waa taladeyda:
dib u soo kabashada ajandaha sida ugu dhakhsaha badan,
ka ogow mawduucyada kala duwan ee looga hadli doono inta lagu jiro kulanka,
tixgelinayaan qofka (qofka) ee warbixinta iyo filashadooda,
ha sugin xilligii ugu dambeeyay inuu kuu diyaariyo.
Diyaarintaada, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad doorato qalabka kugu haboon inaad qaadato qoraallo.
Haddii aad doorbidayso warqad, tixgeli inaad isticmaasho buug yar ama buug yar-yar iyo qalin si aad u shaqeyso.
Haddii aad doorbidayso qoraallo dijitaal ah, xasuuso inaad hubiso in aad haysatid batterit ku filan kiniiniga, laptop ama smartphone.
READ U diyaari farriinta maqnaanshaha tooska ah ee Fasaxyada
Ma tihid superhero sidaa daraadeed ha fileynin inaad wax kasta qoro.
Inta lagu guda jiro kulanku, xusuusnow waxa muhiimka ah, kala sooc fikradaha oo dooro kaliya macluumaadka waxtar u leh helitaanka warbixintaada.
Sidoo kale xasuuso inaad xusuusato waxa aan la xasuusan karin sida taariikhaha, tirooyinka ama magacyada dadka ku hadla.
Ma'aha lagama maarmaan inaad u qorto ereyga eraygiisa. Haddii jumladuhu ay yihiin kuwo dheer oo adag, waxaad ku adkaan doontaa inaad sii wadato.
Sidaa darteed, qaado qoraalka-qaadashada erayadaada, waxay noqon doontaa mid fudud, si toos ah uuna kuu oggolaanayaa inaad si fudud u qorto warbixintaada.
Diyaarso warbixintaada isla markiiba ka dib kulanka:
Xitaa haddii aad qoratay qoraal, waxaa muhiim ah in aad naftaada ku quusato warbixinta isla kulankaas kadib.
Weli waxaad ku jiri kartaa "casiir" sidaa daraadeedna aad awood u leedahay in aad qorto waxa aad xusuusatey.
Dib u soo celi, cadeeyn fikradahaaga, abuuro koobab iyo subtitles.
Hada halkan waxaad diyaar u tahay inaad si fiican u qaadato qoraallada kulanka soo socda. Adiga ayaa kugu habboon inaad hagaajisid talooyinkan habka aad u shaqeyneysid, waxaad noqon doontaa oo kaliya wax soo saar badan.
Xasuusnow in aad ka qeyb qaadatid shirarka, talooyin si aad waxtar u noqoto 7-Maarso, 2020Tranquillus
horeMashruuca Voltaire wuxuu kuu qaadayaa tartanka Orthographic orestographic
socdaDib u dhiska: cawaaqibta iyo talooyin si loo joojiyo wax walba dib u dhigis